Zvinoreva zvemuBhaibheri zveNhamba 3 MuBhaibheri - Zvinoreva Zvemubhaibheri
ipad haigoni kutora mari
sei foni yangu ichindidzinga wifi
sei kugadzirisa iphone 6 yakanamatira pane apple logo
ndichivhara nhamba yangu pakufona
ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI YENhamba 3
Nhamba 3 muBhaibheri
Zvinoreva nhamba 3 muBhaibheri. Unogona kuziva mataurirwo akadai se: Katatu mutemo wengarava kana Zvese zvakanaka zvinouya muzvitatu. Chaiko kunobva zvirevo izvi hazvina chokwadi, asi nhamba yechitatu inoita basa rakakura. Uye zvine chekuita nenzvimbo yakasarudzika yenhamba nhatu muBhaibheri.
Iyo nhamba yechitatu inowanzo kuve yakabatana nekuzara, kungofanana nenhamba yechinomwe negumi nembiri. Iyo nhamba chiratidzo chekuzara. Vanhu vanowanzo funga nezvehutatu: Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Pfungwa iyi haiitike mubhaibheri pachayo, asi pane zvinyorwa zvinodaidza kuti Baba, Mwanakomana, neMweya Mutsvene. Mweya (Mateu 28:19).
Nhamba yechitatu inoreva zvakare kuti chimwe chinhu chakasimbiswa. Kana chimwe chinhu chikaitika katatu kana katatu, chimwe chinhu chakakosha chiri kuitika. Semuenzaniso, Noah anorega hangaiwa ichibhururuka ichibuda katatu kuona kana pasi pakaoma zvakare (Genesisi 8: 8-12). Uye tatu Varume vanoshanyira Abrahama kumuudza kuti iye naSara vachava nemwanakomana. Sara anobva abheka chingwa che tatu saizi yeupfu hwakatsetseka: saka mutsa wavo hauna muganho (Genesisi 18: 1-15). Saka iwe unogona kuti matatu ndiwo akakurisa: kwete makuru kana makuru, asi makuru.
Iyo nhamba yechitatu inoitawo basa mune dzimwe nyaya:
- Mupiro nemubiki vanorota nezvazvo tatu mazambiringa mazambiringa uye tatu tswanda dzechingwa. Mukati tatu mazuva ivo vese vachatora nzvimbo yepamusoro: kudzokera kudare, kana kusungirirwa padanda (Mavambo 40: 9-19).
- Bharamu anorova mbongoro yake katatu . Haangotsamwa chete, asi ane hasha chaizvo. Panguva imwecheteyo dhongi rake rinenge richiona ngirozi munzira katatu (Numeri 22: 21-35).
- David anogadzira tatu Anogwadamira shamwari yake Jonathan, pavanenge vachionana, chiratidzo cheruremekedzo rwechokwadi kwaari (1 Sameri 20:41).
- Guta reNinevhe rakakura zvekuti iwe unoda tatu mazuva ekupfuura napo. Zvisinei, Jona haapfuuri kupfuura rwendo rwezuva rimwe chete. Saka kunyangwe mushure mekuve mudumbu rehove kwe tatu mazuva (Jona 2: 1), haadi kuita zvese zvaanogona kuti ataure shoko raMwari kuvagari (Jona 3: 3-4).
- Peter anodaro katatu kuti haazivi Jesu (Mateo 26:75). Asi mushure mekumuka kwaJesu, anotiwo katatu kuti anoda Jesu (Johane 21: 15-17).
Sezvauri kuona kubva pamienzaniso iyi yese, unosangana nenhamba nhatu muBhaibheri rese. Chiratidzo chehukuru - hukuru - hukuru, hwekuzara uye kuzara. Iwo anozivikanwa mazwi 'Kutenda, tariro uye rudo' anouyawo neiyo vatatu vavo (1 VaKorinde 13:13) uye mazhinji eaya matatu ndiwo ekupedzisira, rudo. Zvinhu zvese zvakanaka zvinouya muzvitatu. Kwete hombe kana kukura, asi chikuru: ndezve rudo.
Red Cardinal Biblical Zvinoreva - Iwo Makadinali Zviratidzo…
ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI ZVE HALO PAKATI POMWEDZI
Zvinoreva zveBhaibheri zveManyowa MuRoto
ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI ZITA MELANIE